TIPS FOR ORPHANS ( T . F . O )
၂၁.၆.၂၀၁၄ ည ၇ နာရီကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
၂၁.၆.၂၀၁၄ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
အပေါ်အသင်း မူလဈေး လက်ရှိဈေး မှတ်ချက်
အာဂျင်တီးနား ၂= (၃=) ၂-၆၀ (၃-၁၀) ဘော်ဒီ ၂= မှ ၂.၂၅ ပြောင်း
ဂျာမနီ ၁-၁၀၀ (၃+၅၀) ၁-၈၀ (၃-၂၀) ဂိုးပေါင်း ၂.၇၅ မှ ၃= ပြောင်း
ဘော.စနီးယား =၂၀ (၂-၈၀) ၁+၉၀ (၂-၈၀) ဘော်ဒီ == မှ ၀.၅ ပြောင်း
၂၁.၆.၂၀၁၄ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက် နံနက်၁၀နာရီ
အာဂျင်တီးနား ၂= (၃=) ၂-၄၀ (၃-၂၀) ဘော်ဒီ ၂= မှ ၂.၂၅ ပြောင်း
ဂျာမနီ ၁-၁၀၀ (၃+၅၀) ၁-၁၀၀ (၃-၂၀) ဂိုးပေါင်း ၂.၇၅ မှ ၃= ပြောင်း
(၂၀.၆.၂၀၁၄) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
1း COSTA RICA ( * * ) မှန်
2း FRANCE GOAL UNDER ( * * * ) မှား
3း ECUADOR ( * * * ) မှန်
4း ECUADOR GOAL OVER ( * ) မှန်
( ၁၉.၆.၂၀၁၄) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
1း IVORY COAST ( * ) မှား
2း URUGUAY ( * * ) မှန်
3း URUGUAY GOAL OVER ( * * * ) မှန်
4း JAPAN GOAL OVER ( * * ) မှား
( ၁၈.၆.၂၀၁၄ ) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
1းNETHERLANDS ( * * * ) မှား
2း CROATIA ( * * ) မှန်
3း CROATIA GOAL OVER ( * ) မှန်
(၁၉.၆.၂၀၁၄) ညနေ ၃ နာရီ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
(၁၉.၆.၂၀၁၄) ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
ကိုလံဘီယာ =၁၀၀ (၂-၃၀) =၇၀ (၂-၇၀) ဘော်ဒီက ၀.၅ မှ ၀.၂၅ ပြောင်း
ဥရုေ၈ွး =၃၀ (၂-၃၀) အင်္ဂလန်...=၈၀ (၃+၉၀) ဥရုဂွေးပေးရာမှ အင်္ဂလန်ပြန်ပေး
ဂျပန် =၂၅ (၂=) =၆၀ (၂-၅၀) ဂိုးပေါင်းက ၂= မှ ၂.၂၅ ပြောင်း
17.6.2014 T . F . O ခန်.မှန်းချက်
1း NETHERLANDS (***)
2း CROATIA (**)
3း CROATIA GOAL OVER (*)
(၁၆.၆.၂၀၁၄) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
ပွဲစဉ် ရွေးချယ်မှု မှန်/မှား ပွဲရလဒ်
ဂျာမနီ-ပေါ်တူဂီ ဂျာမနီ( *** ) မှန် ၄-၀
ဂျာမနီ-ပေါ်တူဂီ ဂိုးအပေါ်(*) မှန် ၄-၀
အီရန်-နိုင်ဂျီးရီးယား အီရန် ( ** ) မှန် ၀-၀
ဂါနာ-အမေရိကန် အမေရိကန်(***) မှန် ၁-၂
Labels: T . F . O ခန်.မှန်းချက်များ
* ဘရာဇီး ၃-၁ ခရိုအေးရှား (၂-၇၀)
( ဈေးပျော.လွန်းတယ် ။ grade -2။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* မက္ကဆီကို ၁-၀ ကင်မရွန်း (၂=)
( ဈေးပျော.လွန်းတယ် ။ grade - 1 ။ ဂိုးအောက် အောင်တယ် )
* စပိန် ၁-၅ နယ်သာလန် (၂-၃၀)
* ချီလီ ၃-၁ သြစတြေးလျ (၂-၈၀)
( ဈေးပျော.တယ် ။ grade -2။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* ကိုလံဘီယာ ၃-၀ ဂရိ (၂+၂၀)
( ဈေးပျော.လွန်းတယ် ။ grade - 1 ။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* ဥရုဂွေး ၁-၃ ကော်စတာရီကာ (၂-၅၅)
* အီတလီ ၂-၁ အင်္ဂလန် (၂=)
( ဈေးပျော.လွန်းတယ် ။ grade - 1 ။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ်)
* အိုင်ဗရီကို.စ် ၂-၁ ဂျပန် (၂-၇၀)
( ဈေးပြင်းတယ် ။ grade - 1 ။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* ဆွစ်ဇာလန် ၂-၁ အီကွေဒေါ (၂-၄၅)
* ပြင်သစ် ၃-၀ဟွန်ဒူးရပ်စ် (၃+၆၅)
( ဈေးပြင်းတယ် ။ grade -3။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* အာဂျင်တီးနား ၂-၁ ဘော.စနီးယား (၃=)
( ဈေးပြင်းတယ် ။ grade -2။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* ဂျာမနီ ၄-၀ ပေါ်တူဂီ (၃+၅၀)
* နိုင်ဂျီးရီးယား ၀-၀ အီရန် (၂-၂၀)
* ဂါနာ ၁-၂ အမေရိကန် (၂-၉၀)
* ဘယ်လ်ဂျီယံ ၂-၁ အယ်ဂျီးရီးယား (၃+၂၀)
( ဈေးပြင်းလွန်းတယ် ။ grade - 1 ။ ဂိုးအပေါ် အောင်တယ် )
* ဘရာဇီး ၀-၀ မက္ကဆီကို (၃+၃၅)
( ဈေးပြင်းလွန်းတယ် ။ grade -2။ ၈ိုးအောက်အောင်တယ် )
* ရုရှား ၁-၁ တောင်ကိုရီးယား (၂-၆၅)
( ဈေးပျော.တယ် ။ grade -3။ ဂိုးအောက် အောင်တယ် )
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်ကို ကြည်.ပါက ဂိုးပေါင်းဈေးပြင်းပြီး မအောင်တာ ဆိုလို. ဘရာဇီး-မက္ကဆီကို
ဈေးပျော.ပေမယ်. ဂိုးအပေါ် အောင်တာတွေကိုလဲ တွေ.ရပါတယ်။
ဈေးပြင်းပြီး GRADE 1 ဆိုရင် ဂိုးအပေါ် သေချာနေတာ တွေ.ရပါတယ်။
ဒီညအတွက် ဈေးလဲပြင်း GRADE 1 လဲ ဖြစ်နေတာက နယ်သာလန် နဲ. သြစတြေးလျ ပွဲပါပဲ။
(၁၅.၆.၂၀၁၄) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
ဆွစ်ဇာလန်-အီကွေဒေါ ဆွစ်ဇာလန် (* * ) မှား ဆွစ်ဇာလန် ၂-၁ အီကွေဒေါ
ပြင်သစ်-ဟွန်ဒူးရပ်စ် ပြင်သစ် ( * * * ) မှန် ပြင်သစ် ၃-၀ ဟွန်ဒူးရပ်စ်
အာဂျင်တီးနား-ဘော.စနီးယား အာဂျင်တီးနား ( * * * ) မှား အာဂျင်တီးနား ၂-၁ ဘော.စနီးယား
(၁၄.၆.၂၀၁၄) မွန်းတည်. ၁၂ နာရီ ကမ္ဘာ.ဖလားအာရှဈေးကွက်
အပေါ်အသင်း မူလတည်ဈေး လက်ရှိဈေး
ဘယ်လ်ဂျီယံ ၁-၇၀ (၂-၈၀) ၁-၁၀၀ (၃+၃၀)
ဘရာဇီး ၂+၇၅ (၃+၇၀) ၁-၉၀ (၃=)
ရုရှား =၉၀ (၂-၂၀) ၁+၅၀ (၂-၆၀)
( ၁၄.၆.၂၀၁၄ ) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
(14.6.2014) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
ကိုလံဘီယာ-ဂရိ ဂရိ (* * ) မှား ကိုလံဘီယာ ၃-၀ ဂရိ
ဥရုဂွေး-ကော်စတာရီကာ ဥရုဂွေး ( * * ) မှား ဥရုဂွေး ၁-၃ ကော်စတာ
အီတလီ-အင်္ဂလန် အင်္ဂလန် ( * ) မှား အီတလီ ၂-၁ အင်္ဂလန်
အိုင်ဗရီကို.စ်-ဂျပန် ဂျပန်ဂိုးအပေါ် (* * ) မှန် အိုင်ဗရီကို.စ် ၂-၁ ဂျပန်
(၁၃.၆.၂၀၁၄) T . F . O ခန်.မှန်းချက်
မက္ကဆီကို-ဂရိ ဂရိ( ** ) မှား ၁-၀
စပိန်-နယ်သာလန် စပိန် (*) မှား ၁-၅
ချီလီ-သြစတြေးလျ ချီလီ (**) မှန် ၃-၁
ချီလီ-သြစတြေးလျ ချီလီဂိုးအပေါ်(*) မှန် ၃-၁
ဂျာမနီ =၁၀၀ (၂-၈၀) ၁+၉၀ (၃+၄၀)
နိုင်ဂျီးရီးယား =၆၀ (၂+၂၀) ၁+၉၀ (၂-၈၀)
ဂါနာ =၂၀ (၂-၂၀) =၃၀ (၂-၁၀၀)
နည်းစနစ်ပိုင်း မာစတာ လူးဝစ် ဗန်ဂါးလ်
ပြီးခဲ.တဲ. သောကြာညမှာ နယ်သာလန်က လက်ရှိကမ္ဘာ.ချန်ပီယံ စပိန်ကို ၅-၁ နဲ. အနိုင်ယူလိုက်တဲ.အတွက် အားလုံး အံ.အားတသင်. ဖြစ်ခဲ.ရပါတယ်။ စပိန်ရဲ. နောက်တန်း၊ စပိန်ရဲ. ကစားဟန်၊ စုဖွဲ.မှုတွေကြောင်. နယ်သာလန် အလွန်ဆုံး သရေပဲ မျှော်လင်.နိုင်လိမ်.မယ်လို. အများစုက တွက်ဆခဲ.ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ်. နယ်သာလန် နည်းပြ ဗန်ဂါးလ်ရဲ. ပြောင်မြောက်တဲ. နည်းစနစ်ပိုင်းတွေကြောင်. နယ်သာလန်ဟာ စံချိန်တင် ရလဒ်တစ်ခုကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ.ပါတယ်။ ဗန်ဂါးလ်ဟာ TOTAL FOOTBALL ကစားဟန်ကို စွန်းလွှတ်ပြီး စပိန်နဲ.ပွဲအတွက် မှန်ကန်တဲ. နည်းစနစ်၊ နည်းဗျူဟာကို ချမှတ်နိုင်ခဲ.တယ်လို. ဆိုရပါမယ်။ စပိန်ရဲ. နောက်ခံလူတွေနာားမှာ ဗန်ပါစီ နဲ. ရော်ဘင်တို.ကို ရှိနေစေပြီး နောက်တန်းက စပိန်ကို မျှားကစားစေခဲ.ပါတယ်။
DIRECT တိုက်စစ် ကို အသုံးပြုတာဟာ စပိန်ကွင်းလယ်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို. အကောင်းဆုံးပဲ လို. ဗန်ဂါးလ် တွက်ဆခဲ.ပါတယ်။ စပိန်ကို PASSING GAME သွားယှဉ်ရင် ခံစားသွားရမှာကို ဗန်ဂါးလ် တွက်ဆခဲ.တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော. သူ.ရဲ. မှန်ကန်တဲ. နည်းစနစ်ပိုင်း ချမှတ်မှုတွေကြောင်. စပိန်ဟာ ခေတ်တစ်ခေတ် အဆုံးသတ်ရတော.မလိုတောင် ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ဒါကြောင်.လဲ ကမ္ဘာ.ဖလားပြိုင်ပွဲဆိုတာ နည်းစနစ် နဲ. နည်းဗျူဟာ ပြိုင်ပွဲကြီး လို. ခေါ်ဆိုကြတာ ဖြစ်ပါလိမ်.မယ်။ ကမ္ဘာ.ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ နည်းပြဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ ဆိုတာ ဒီပွဲက သက်သေဖြစ်ခဲ.ပါတယ်။
၁၃.၆.၂၀၁၄ ဈေးအပြောင်းဆုံး ပွဲများ နှင်. မဖြစ်သင်.သော အနေအထားများ
(၁၃.၆.၂၀၁၄) ဈေးအပြောင်းဆုံး ပွဲများ နှင်. မဖြစ်သင်.သော အနေအထားများ ယနေ.ည ကမ္ဘာ.ဖလား အုပ်စု (၃)ပွဲမှာ ပထမဆုံး ဈေးအပြောင်းဆုံးက စပိန်...
၁၂.၆.၂၀၁၄ T . F . O ခန်.မှန်းချက်
၁၂.၆.၂၀၁၄ T . F . O ခန်.မှန်းချက် --------------------------------------------------------------------------- FOR ONLY MEMBER ရွေး...
၂၀၁၄ကမ္ဘာ.ဖလားအပေါ် ဂိုးပေါင်းဈေးများသုံးသပ်ချက် ------------------------------------------------------------- * ဘရာဇီး ၃-၁ ခရိုအေးရှ...
(၁၉.၆.၂၀၁၄) ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက် ---------------------------------------------- အပေါ်အသင်း............မူလတည်ဈေး..................လက်...
(16.6.2014) ကမ္ဘာ.ဖလားအာရှဈေးကွက် အပေါ်အသင်း...............မူလဈေး.................လက်ရှိဈေး ဂျာမနီ =၁၀၀ (၂-၈၀) ...
၂၁.၆.၂၀၁၄ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက် အပေါ်အသင်း မူလဈေး လက်ရှိဈေး မှတ်ချက် အ...
၁၄.၆.၂၀၁၄ ညနေ ၄း၀၀ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
၁၄.၆.၂၀၁၄ ညနေ ၄း၀၀ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက် အပေါ်အသင်း........................မူလဈေး................လက်ရှိဈေး ကိုလံဘီယာ..........
ကြာသပတေးနေ. ညနေ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
ကြာသပတေးနေ. ညနေ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်နှင်. ပွဲအချိန်ဇယား ကြာသပတေးနေ. ညနေ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက် ----------------------------------...
(၁၄.၆.၂၀၁၄) မွန်းတည်. ၁၂ နာရီ ကမ္ဘာ.ဖလားအာရှဈေးကွက် --------------------------------------------------------------------- အပေါ်အသင်း ...
ကမ္ဘာ.ဖလား ဖော်လို နှင်. စနေည ခြေစမ်းပွဲများ အကြောင်း
ကမ္ဘာ.ဖလား ဖော်လို နှင်. စနေည ခြေစမ်းပွဲများ အကြောင်း ------------------------------------------------------------- ကမ္ဘာ.ဖလားပြိုင...
T . F . O ခန်.မှန်းချက်များ >
T.F.O အဖွဲ့ အကြောင်း
T . F . O အမှတ်တံဆိပ် LOGO
T . F . O FORUM
T . F . O ခန်.မှန်းချက်များ
(၁၄.၆.၂၀၁၄) မွန်းတည်. ၁၂ နာရီ ကမ္ဘာ.ဖလားအာရှဈေးကွက...
အီတလီဂိုးသမား ဘတ်ဖွန် ပါဝင်နိုင်ရန် ရုန်းကန်နေရ
၁၃.၆.၂၀၁၄ ည ၉း၀၀ အာရှဈေးကွက်
၁၃.၆.၂၀၁၄ ဈေးအပြောင်းဆုံး ပွဲများ နှင်. မဖြစ်သင်....
၁၃.၆.၂၀၁၄ ည ၇း၃၀ အာရှဈေးကွက်
၁၃.၆.၂၀၁၄ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
အီတလီ နှင်.အင်္ဂလန် ကစားမည်.ကွင်း အခြေအနေဆိုးရွားနေ
ကြာသပတေးနေ. နံနက် ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်နှင်. ပွဲအ...
ချီလီ အသင်းအကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံ သုံးသပ်ချက်
နယ်သာလန်အသင်း အကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံ သုံးသပ်ချက်
ဗုဒဟူးနေ.ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ.ဖလား အာရှဈေးကွက်
စပိန်အသင်း အကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံသုံးသပ်ချက်
ကင်မရွန်းအသင်း အကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံသုံးသပ်ချက်
မက္ကဆီကို အသင်းအကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံသုံးသပ်ချက်
ခွေးကလေး ရူက အင်္ဂလန် အနိုင်ရမယ်လို. ခန်.မှန်းပြန်
ကင်မရွန်းအသင်း BONUS ပြသနာ ပြေလည်မှု ရရှိ
ဘရာဇီး GAME PLAN ကို ဖရက် ဖွင်.ဟ
ကြားရက်ခြေစမ်းပွဲတွေအပေါ် ကျော်မျိုးဟန် သုံးသပ်ချက်...
ဖိအားဒဏ်များများကို ဂျာမနီနည်းပြ လို မစိုးရိမ်
ကမ္ဘာ.ဖလား အဖွင်.ပွဲများအတွက် အာရှဈေးကွက်
ဖလူမီးနန်.စ် ၃-၅ အီတလီ
ကမ္ဘာ.ဖလား ဖော်လို နှင်. စနေည ခြေစမ်းပွဲများ အကြောင...
(၇.၆.၂၀၁၄) ခြေစမ်းပွဲ အာရှဈေးကွက်များ
( ၆ .၆.၂၀၁၄) ဈေးအပြောင်းဆုံးပွဲများနှင်. မဖြစ်သင်...
(၆.၆.၂၀၁၄) ကျော်မျိုးဟန် နဲ. SOCCER-FOLLOW ဆွေးနွေ...
(၆.၆.၂၀၁၄) ခြေစမ်းပွဲ အာရှဈေးကွက်များ
EA SPORT ရဲ. ခန်.မှန်းချက် အပြည်.အစုံ
ဗိုလ်လုပွဲတွင် အာဂျင်တီးနားနှင်. တွေ.ဆုံချင်သည်ဟု ...
မက္ကဆီကိုနှင်.ပွဲ စီရော်နယ်ဒို လွဲချော်
နည်းစနစ်ပိုင်း အဆင်သင်.မဖြစ်သေးသော နယ်သာလန် ဝေဖန်ခ...
အပူဒဏ်အခံစားရဆုံးအသင်းမှာ ဂျာမနီ နှင်. အီတလီ ဖြစ်ေ...
မက်ဆီ ၊ ရော်နယ်ဒို ၊ ရွန်နေး သုံးဦးပေါင်း ဒီအော.ဖ...
( ၅.၆.၂၀၁၄ ) ဈေးအပြောင်းဆုံးပွဲများ နှင်. မဖြစ်သင...
ဂျာမနီ အသင်းမှာ ဖီးလစ်လမ်းနဲ. နူယာ မသေချာ
၂၀၁၀ တုန်းက မှန်ကန်ခဲ.သော EA SPORTက ၂၀၁၄ မှာ ဂျာမန...
(၄.၆.၂၀၁၄) ကျော်မျိုးဟန် နဲ. S0CCER-FOLLOW ဆွေးနွေ...
(၄.၆.၂၀၁၄) ဈေးအပြောင်းဆုံးပွဲများနှင်. မဖြစ်သင်.ေ...
(၄.၆.၂၀၁၄) ကျော်မျိုးဟန် နဲ. SOCCER-FOLLOW ဆွေးနွေ...
အပြောင်းအလဲများစွာ လုပ်ခဲ.ခြင်းကို ပရန်ဒယ်လီရှင်းလ...
(၄.၆.၂၀၁၄) ခြေစမ်းပွဲ အာရှဈေးကွက်များ
ဂရိ ၀ - ၀ နိုင်ဂျီးရီးယား ( FT )
ဘရာဇီး ၄ - ၀ ပနားမား ( FT )
ဆွစ်ဇာလန် ၂ - ၀ ပီရူး ( FT )
ချက် ၁ - ၂ သြစတြီးယား (FT)
ကမ္ဘာ.ဖလား အုပ်စုတက်မည်. အသင်းများ မော်ရင်ညိုခန်.မှ...
ယူအေအီး ၁ - ၀ ဂျော်ဂျီယာ (FT )
ချက် ယူ-၁၈ ၃-၀ မွန်တီနီဂရိုး ယူ-၁၉
ရေဘ၀ဲလ်ပေါလ်ကို စိန်ခေါ်နိုင်မလား (၂)
ဒီညအတွက် ဈေးအပြောင်းဆုံး ပွဲ
(3.6.2014) T . F . O FORUM ( ကျော်မျိုးဟန် နှင်. S...
ဘရာဇီးနည်းပြ စကိုလာရီ၏ နောက်ဆုံး မိန်.ခွန်း
(၃.၆.၂၀၁၄) ခြေစမ်းပွဲ အာရှဈေးကွက်များ
Ballon d'Or ကျိန်စာ နှင်. စီရော်နယ်ဒို
ကိုလံဘီယာတိုက်စစ်မှူး ဖယ်ကာအို ကမ္ဘာ.ဖလား လွဲချော်
( DONATION FOR APRIL )
2014 WORLD CUP (45)
T . F . O FORUM (6)
T . F . O ခန်.မှန်းချက်များ (7)
T.F.O အဖွဲ.အကြောင်း (4)
ကလပ်- သတင်းများ (8)